Chipikirwa chemvura chakaberekwa chemvura, mvura dzokusava neAluminium mush runotengesa fekitari - China Boegger
Uri pano:Musha > Products > Architectural Mesh > Mhoteredzo Yepuro>Chiremba Chesimbi
Tsika yesimbi yakafukidzwa ine zvinhu zvakanaka uye zvinhu zvakanaka zvokudya. Kunogona kubatsira kuvanza gadziriro dzokucheka, kugadzira mataya nokuda kwemhepo, nepo kuchibvumikisawo kuchengeteka kwechivako uye mhepo yakanaka. Tichirangarira unhu hunopinza chiedza hwesigwe rakaparadzwa, rinogona kuparira mhiriro inofadza inoshandira pamwe nezviedza.
Kuparadza kwakaparadzwa neSupera Chatsa
Kuparadza kwakaparadzwa neMipoti
Zvinhu zvinofanira kurangarira:Zvakasarudza.
Kuva nesimba kuti uremu - zvinhu zvakarerutsa zvinovimbisa upenyu hwakarefu hwevanhu.
Inyika yakaisvonaka kunzwika.
Ndizvo zvinodzivisa mwoto nounyiri.
Ndiri nyore kuchenesa nokuchengeta.
Naizvozvo, tinorumbidza aluminium, simbi isina madza uye simbi rakakwaniswa sezvinhu zvakakodzera zvinoshandiswa.
Zvinhu Zvakanga zvichiitwa Zvakanyorwa
Chisarudzo Chokuita Nache
Apo unosarudza mitoo yemhosva yemhosva, chitarisiko chokuita, chiedza, vanofanira kurangarirwa nemhepo.
Zvinhu zvakawanda zvakakodzera zvinhu zvakanaka.
Nzvero yacho inoratidza kuti nharaunda yakazaruka yakakura kupfuura 10% ine mugumisiro wakanaka wokudzvinyirira. Uye kana nharaunda yakazaruka yakakura zvikuru, zvinova nani kuva nemhepo.
Masei eAluminium Perforated
Pasi rekomba rakaumbwa nesimbi rakanga risingashandiswi rakaparadzwa.
Zvinhu zvakawanda zvakawanda, zvinogona kuita kuti zvive zvakanaka uye zvakajeka. Tinogovera basa rokupenza ruvara rweRAL rakagadzirirwa.
Mbiri:Mvura Dzine Mvura
Tevere:Mvura yesimbi yakawedzerwa
Taga: aluminium ceiling panels, mesh ceiling, metal perforated screen,
Marudzi epapuro realuminium
Mutoo wokuisa mutoo wemapinzi ealuminium
Kuparadza kwamafura ealuminium
Zvakadiniko nezvamapanya ealuminium?
Zvinhu zvinokosha zvokusarudza zvemvura
Mugumisiro wokuti mash
Chii chinopa ngwariro?
Zvinhu zvinogadzirwa sei?